Vechidiki Vakuru vs Nyowani mukuru | Zvazvino Zvinyorwa
Lidia aguilera | | dzakawanda
Ini ndinozviona semuverengi anoshingairira weVadiki Vakuru, zvisinei, kwenguva yakareba ndanga ndichiona kugadzirirwa kwechikamu chitsva icho chingangoita senge chakagadzirirwa vateereri vamwe nekuda kwekufanana muzita rayo: mukuru mukuru. Nhasi ndinoda kutaura newe nezve aya maviri mabhuku «mhando» (mune makotesheni sezvo asiri iwo chaiwo marudzi) ari mufashoni munguva pfupi yapfuura, inova yega uye ndeapi mutsauko. Nekuti kwete, ivo havana kufanana kana kuitirwa kune vateereri vamwe.
1 Chii chinonzi Mudiki Mudiki kana YA?
2 Chii chinonzi Nyowani Mukuru kana NA?
3 YA uye NA mabhuku
Chii chinonzi Mudiki Mudiki kana YA?
Pakagara paine zvinyorwa zvevechidiki, pasati paine mashoma emabhuku aya asi paive nevechidiki zvinyorwa. Zvisinei nguva pfupi yadarika chikamu ichi chakatanga kuzivikanwa seYoung Adult (Unogona kuiwana yakapfupikiswa saYA), uye kunyangwe kune dzimwe nzvimbo vanonyorwa se "Mudiki akura", vachishandisa dudziro chaiyoiyo. Vechidiki Vakuru Mabhuku Iwo mabhuku evechidiki ehupenyu hwese, anofukidza makore kubva angangoita makore gumi nematatu kusvika pa13, kunyangwe isu tatoziva kuti zera iri rekuzviisa pasi sezvo munhu wega wega achigona kuverenga zvavanoda zvisinei nevateereri vavanoda. Muchikamu ichi tinogona kuwana mabhuku emhando dzese, kubva pane chaiko senge Pasi penyeredzi imwe chete, kunyange zvemashiripiti senge Twilight, uchipfuura nedystopias senge Iyo Nzara Mitambo o Divergent, kutaura mamwe emazita anonyanya kuzivikanwa mune eVechidiki mabhuku.
Chii chinonzi Nyowani Mukuru kana NA?
Kune rimwe divi, kunyangwe iyo Nyowani Mukuru (iwe unogona kuiwana yakapfupikiswa se NA) inoita kunge hama yekutanga yeiyo yapfuura, mune ino inonzi yainzi Nyowani Mukuru yakanyanyorambidzwa kupfuura yapfuura.
Inodanwa Nyowani Mukuru kune iwo mabhuku anovavarira vateereri pakati pegumi nemasere kusvika makore makumi matatu. Mune mhando iyi yezvinyorwa nyaya dzemazuva ano dzinokunda kana chaicho chevatambi vaviri pakati pavo panomuka rudzi rwekukwezva. Panogona kunge paine mamwe marudzi mukati meichi chikamu asi chokwadi ndechekuti zvese zvandakawana nezveNew Adult, kunyangwe zvanga zvisiri zvishoma, zvine hunhu hwakafanana: mukomana, musikana uye, izvo zvinoita kuti zvinangiswe kune vateereri vakuru: kazhinji pane zviitiko zvebonde uye nemutambo chaiwo. Kuita rumwe rudzi rwekuenzanisa, ini ndingaritsanangure seyakakura yerudo runyorwa uko vatambi vari vadiki uye vachizvibata vakadaro, kugara uchitakura mutambo weakaremerwa zvakapfuura, kurwara, kana mamwe maonero akafanana. Mienzaniso yeVatsva Vanyori vanyori ndiColleen Hoover naSimone Elkeles.
Nenzira iyi, nepo Mudiki Mudiki achisanganisira nhamba hombe yemhando, iyo New Adult inotsanangurwa sedanho rinorambidzwa sezvo ichisarudza kunyangwe iyo mhando yacho ndeyayo, ichinangidzirwa kune chaiwo vateereri. Semaonero angu, ese ari maviri akasiyana chaizvo uye saka zvinonakidza kwandiri kuti ndiwane aya mazwi matsva ari kuiswa uye kutsanangura zvinyorwa zvazvino. Kunze kwezvo, zvakanaka kuti tizive zvikamu zvacho pakusarudza mabhuku atinoda kuverenga. Ini, kana ndiri ini, kana ndichifanira kusarudza imwe yeaya ma "genres" maviri ini ndichiri kunamatira nevechidiki mudiki, handisi kunyanya kupinda mumadhirama
YA uye NA mabhuku
Kupedza Ndinokusiira runyorwa rwemamwe mabhuku eVechidiki uye mamwe eNew Adult, kana izvi zvekupinda zvaita kuti iwe ude kuongorora mune urwu rudzi rwemabhuku.
Neal Shutterman Kubviswa - Mudiki Mudiki - Fambisa iyo yakanaka kuverenga faira
Madota aIlsa J. Nhema - Mudiki Mudiki - Fambisa iyo yakanaka kuverenga faira
Vampire academy de Richelle Mead - Kurumu - Fambisa iyo yakanaka kuverenga faira
A Kiss muParis naStephanie Perkins - Mudiki Mukuru - Fambisa iyo yakanaka kuverenga faira
Rainbow Rowell's Fangirl - Mudiki Mukuru - Fambisa iyo yakanaka kuverenga faira
Pasina tariro. Kubata Denga naColenen Hoover - Nyowani Mukuru - Fambisa iyo yakanaka kuverenga faira
Njodzi Inoshamisa yaJamie McGuire - Mutsva Wevakuru - Fambisa iyo yakanaka kuverenga faira
Mutambo waCallie naKayden naJessica Sorensen - Mukuru Mukuru - Fambisa iyo yakanaka kuverenga faira
Respira de Abbi Glines - Nyowani Mukuru - Fambisa iyo yakanaka kuverenga faira
Wati wamboverenga here mabhuku eVadiki Vakuru? Uye Nyowani Mukuru? Waizviziva here izvi zvikamu?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Vechidiki Vakuru vs Nyowani mukuru